कलंकीबाट स मातिएका सम्झना र सिर्जनालाई केटा देख्नै नहुने ? प्रहरी हिरासतमा पनि देखाए उत्ताउलो ब्यबहार, त्यसपछि प्रहरीले – Gazabkonews
कलंकीबाट स मातिएका सम्झना र सिर्जनालाई केटा देख्नै नहुने ? प्रहरी हिरासतमा पनि देखाए उत्ताउलो ब्यबहार, त्यसपछि प्रहरीले
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ठ गी, लु ट पा ट तथा प के ट मा’रीमा संलग्न महिलोको गिरोह प क्रा उ परेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका १४ कलंकीबाट दुई जना महिला पा के ट मा’र प क्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ, गोंगबु ११ की २४ वर्षीया सम्झना परियार र सिन्धुपाल्चोक लिसंखु घर भई हाल काठमाडौँ मनमैजु बस्ने २३ वर्षीया सिर्जना उप्रेती रहेका छन् ।
“यो उनीहरू त्यस दिनको मात्र पकेटमा’रको पैसा रहेछ। त्यस दिन दुई वटामात्र पकेट मा’रेका रहेछन्। हुलियाको आधारमा समातेका हौँ” प्रहरी प्रभाव कलङ्कीका प्रहरी निरीक्षक मिठु खड्काले भने। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका युवतीले करिब ३ वर्ष देखि प के टमा’र गर्दै आएको बयान दिएका छन्। उनीहरु लामो समयदेखि कलंकी, कालिमाटी, बल्खु, बाफल एरियालाई आधार बनाई चोरी, पकेट मा’र्ने तथा ठग्ने काममा संलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुवै युवती पुरुषहरुसँग नजिकिइहाल्ने र योजनाव’द्ध तरिकाले ठगी तथा लु’टपा’ट गर्ने कार्यमा संलग्न थिए ।
“भिड भएको गाडीमा चढ्ने अनि केटीहरूले गाडी भित्र उभिएका प्यासेन्जरलाई ठेलम् ठेल गर्ने, अनि पकेटबाट पैसा झिक्ने गर्ने ट्रेन्ड देखियो” प्रहरी निरीक्षक खड्काले भने। उनीहर पे शेवर रुपमै ठ गी तथा पकेटमा’रीमा संलग्न रहेको प्रहरीेले जनाएको छ । पुरुषहरुसँग नजिकिने र उनीहरुले पाकेट मा’र्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। केहीलाई उनीहरुले ठगी समेत गरेका थिए ।
फुलबुट्टे सारीबाट चर्चा कमाएपछि मलिका महतको ब्यस्तता बढ्यो : फुलबुट्टे सारीबाट चर्चा कमाएपछि मलिका महतको ब्यस्तता बढ्यो, छोरीको ब्यस्तता बढेका बेला आमा पनि मलिकासँगै कार्यक्रममा देखिइन्, पलसँग मलिकाको बिहेको कुरा गर्दा लजाइन् आमा, हेर्नुहोस् भिडियोकाठमाडौ । नेपाली चलचित्र उद्योगमा कसैको नसोचेको उपलब्धि भइरहेको छ । यही पंक्तिमा पर्छिन नव–नायिका मलिका महत्त । उनलाई यति चाडै नायिका बन्छु भन्ने लागेको थिएन । तर, चलचित्र ‘यात्रा’ले करियरमा उच्च यात्रा तय गर्यो । मलिका नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भित्रिएसँगै उनलाई ‘क्यूट हिरोइन’ भन्नेहरु पनि धेरै छन् । उनी आफूले नै आफूलाई यसरी मुल्यांकन भने नगर्ने बताउँछिन् । सानैबाट अभिनयमा रुची भएतापनि यस क्षेत्रमा आउन उनलाई साइत नै हेर्नुपर्ने थियो ।
चलचित्रमा उनी दुबै आँखा देख्न नसक्ने यूवतीको भूमिकामा छिन् । मलिका आफूलाई यो भूमिकामा काम गर्न अप्ठ्यारो लागेपनि चुनौती भने लिन तयार भएको सुनाउँछिन् । चलचित्र ‘यात्रा’मा समावेश ‘चट्ट रुमाल क्या मालुम’ बोलको गीतले सर्वाधिक गाली पाउँदा उनलाई चित्त भने दुखेको रहेछ । उनले, आफूलाई यती धेरै आलोचना हुन्छ भन्ने नलागेको पनि स्पष्ट पारिन् । चैत्र २९ गतेबाट रिलिज हुने चलचित्रको व्यापारले आफ्नो करिअरमा नयाँ बाटो कोरिदिने विश्वास उनको छ ।